Yongeza Indawo okuyiSayithi yakho kwimephu yakho yeefayile ngeKML File | Martech Zone
Yongeza indawo okuyiyo kwindawo yakho yesitampu ngefayile ye-KML
NgoMvulo, Oktobha 15, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Unokungayazi le nto, kodwa uGoogle uya kuyibeka kwindawo yendawo kunye namanye amaphepha. Oku kunokwenziwa ngcono ngokubonelela nge- Ifayile ye-KML kunye nolungelelwaniso lwakho kwifomathi yeXML- ifomathi ekulula ukuyifunda ngokudibanisa iinkqubo.
Ungakuvumeli oku koyikise! Kulula kakhulu ukwakha ifayile yeKML kwaye uyongeze kwindawo yakho. Ngapha koko, ndinayo iwebhusayithi eya kuyakhela ifayile yakho ye-KML ukuze uyikhuphele, Ukulungiswa kweedilesi. Ndongeze amanqaku okhuphelo namhlanje!
Yakha ifayile ye-KML ngendlela elula:
Faka idilesi yakho kwi Ukulungiswa kweedilesi kwaye ungenise. Ukuba indawo emephini ayichanekanga, ungatsala isiphawuli sakho kwindawo efanelekileyo (intle kakhulu, huh?). Ngoku uza kubona ikhonkco "lokukhuphela" kwisihloko secandelo le-KML. Xa ucofa oku, unokuzikhuphelela kwifayile ukuze uyilayishe kwindawo yakho kamva.
Ndingayihlela kwakhona ifayile (sebenzisa nje nawuphi na umhleli wokubhaliweyo) kwaye ungeze igama lebhlog yakho phakathi kweethegi zenkcazo. Umzekelo:
Igama lesiza sam> / inkcazo>
Yongeza i-KML kwimephu yakho yesayithi:
Ukuba usebenzisa iWindowsPress, kuya kufuneka usebenze Iplagi yeGenerator yeXML by Arne Brachhold -Awuyi kufumana iplagi ebhetele okanye ebaluleke ngakumbi naphina! Olunye lwezona zinto zibalulekileyo kule plugin kukuba unokongeza ifayile ye-KML kuyo. Ngenisa i-URL epheleleyo yemephu yecandelo lemephu elongezelelweyo.
Ukuba awunayo i-WordPress, uya kufumana imiyalelo kuGoogle ngendlela yokongeza ireferensi yakho ye-KML kwimephu yakho yesayithi.
Yiyo leyo! Yakha ifayile ye-KML, layisha ifayile kwindawo yakho, kwaye uyongeze kwimephu yakho yesayithi.
tags: ngokwendawogeolocationKMLyendawo seoimephu
Masijoyine iNethiwekhi yokuNxibelelana
Usuku lokuSebenza kweBlog: Amanzi neoyile
Agasti 6, 2008 kwi-11: 29 AM
Kulungile, ke masizenze ngathi ndinendawo endiyenzelwe ukuCofa okungafaniyo komqolo kwaye idilesi yam iseChula Vista. Kuya kuba nzima ngenene ukuba ndibekwe eSan Diego kuba idilesi yam ibonisa ukuba andikho. Ukuba ndiyitshintshe ifayile yam yeKML nge http://www.addressfix.com/ kwaye uyihambise eSan Diego, emva koko ndithetha ngokucinga ukuba kufanelekile ukuba ndibenengxaki yokufumana indawo "yokuqaqanjelwa ngumqolo san diego?
Agasti 6, 2008 ngo-1: 08 PM
Hypothetically, ewe. Khange ndifunde ukuba ingakanani iJografi esele iqalile ukulinganisela kwiziphumo okwangoku, kodwa uGoogle uyaqhubeka nokulungisa ii-algorithms zabo ukufumana iziphumo abantu abafuna ukuzimela kuzo zonke izinto ezithandwa ngabantu. Uvavanyo luhlala luyindlela yokufumanisa!
Sep 4, 2011 kwi-4: 52 AM
Hee enkosi yemigulukudu ngolu lwazi lumnandi kwi-KML. Bendicinga ngayo nje namhlanje kumthengi kwaye bendidinga zombini amakhonkco kunye nolwazi ngokubanzi olufake apha. Andazi ukuba izokukhokelela phi kwiingcebiso zam kumthengi, kodwa ndicinga ukuba undincedile ukuba ndiqalise.
Cheers (kwaye Enkosi!)
Sep 4, 2011 kwi-4: 56 AM
Uyabheja! Ndikuxabisa kakhulu ukuthatha kwakho ixesha usazise.